Xildhibaan Baarlamanka Somaliland ka tirsan oo ka digay dagaal uu Sheegay inay Soomaaliya waddo | Aftahan News
Xildhibaan Baarlamanka Somaliland ka tirsan oo ka digay dagaal uu Sheegay inay Soomaaliya waddo
Hargeysa (Aftahannews)- Xildhibaan Naasir Cali Shire oo ka mid ah Mudaneyaasha Golaha Wakiillada Somaliland, ayaa ka digay dagaallo qaawan oo diblamaasiyadeed oo uu sheegay inay Soomaaliya ku soo qaadday Somaliland.
Naasir Cali Shire oo Warbaahinta la hadlay, ayaa u soo jeediyay Soomaaliya in ay ka waantoobaan colaadda iyo dhagaraha ay ku hayaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland, waxaanu intaas ku daray in baraha bulshada (social media) laga wado sidii loo kicin lahaa Shacabka reer Somaliland.
Naasir Cali Shire oo rimahaa ka hadlayayna waxa uu yidhi; “Dhawr jeer oo hore ayaan ifiyay in dagaal innagaga socdo Soomaliya, dagaalkaas oo Somaliland ku jihaysan oo odhanaya halkee baynu Somaliland ka galnaa iyo sideen Diblamaasiyadda uga soo xidhnaa iyo in nabada Somaliland ka jirta sidii loo carqaladayn lahaa ee dadka layskugu diri lahaa.”
“Waxana jira niman dhallinyaro ah oo dhashay 1991 kii wixii ka dambeeyay oon fikir badan ka haysan wixii loo soo maray Qarankan oo lacag lagu kasbaday.waxaanad dib ugu fiirsataan waxyaabihii ka dhacay wadamada Yaman Masar Liibiya iyo Sudan waxa laga burburiyay Social Media waxaanay ku bilaabeen in dhallinyaradaasi maasayj ay u diraan waxaana y ku kiciyeen dawladihii markaa jiray iyagoo ku andacoonaya in aanay waxba jirin taas ayaana keentay in dawladahaa lagu burburiyo”. ayuu yidhi Xildhibaan Naasir.
Waxaa kale o uu Xildhibaanku ka hadlay hubka dawladda Masar ay siisay Soomaaliya oo uu sheegay in uu halis ku yahay ammaanka guud ee mandaqada isla markaana waxa uu ku eedeeyay dawladda Masar in ay jebisay cunaqabatayntii hubka ee sarnayd Soomaaliya.
“Wuxuu noqonayaa hubkaasi mid lagu isticmaalo dadka Soomaaliyeed waxaanay ka hor imanaysaa Cunoqabatayntii Hubka ee la saaray Soomaaliya Hadii meel dab yaallo dab lagu sii shido khatarteeda ayay leedahay, waxaannu doonayaa Farmaajo in xoog laysku muquuniyo sabankana ma shaqeeyo caqligaasi.” sidaa ayuu yidhi Xildhibaanku.
Waxaanu Xildhibaan Naasir oo hadalkiisa sii wataa intaas ku ladhay; “Cid walibana way ogtahy in Somaliland ay tahay Qaran jira oo taagan waana wax lagu qoslo. Waana Siyaasad faashil ah in Soomaaliya tidhaahdo Xildhibaan ayaad tahay dadka u shaqo tegay ee ka soo jeeda Somaliland, waxaanan u soo jeedinyaa inay ka waantoobaan Colaadda iyo dhagaraha ay ku hayaan Somaliland.”